Google Pixelbook Go i5 Chromebook Black (8GB/128GB) ~ ICT.com.mm
Pay 100% with i/mBanking!
HomeGoogle Pixelbook Go i5 Chromebook Black (8GB/128GB)
Google Pixelbook Go i5 Chromebook Black (8GB/128GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ CPU: Intel Core i5-8220Y 1.3GHz (dual-core; 4MB cache; boost up to 3.9GHz) Graphics: Intel UHD Graphics 615 (300MHz) RAM: 8GB LPDDR3 Screen: 13.3-inch Full HD (1,920 x 1,080; 166... [Learn more]
Brand: GoogleSKU: 150185N/ASee more: Computer Systems, Deals, Flash Sale, Google, Just For You, Laptops / Notebooks, Products, Recent Updates, Staff Picks, Star Universe, WarehouseFilter by: 128GB eMMC, 13.3", 8GB RAM, Black, Chrome OS, Flash Sale, Intel Core i5-8th Gen, Intel Integrated Graphics, Laptops (PC), Promotion, SU, The Best Portable Laptops 2020, Warehouse
CPU: Intel Core i5-8220Y 1.3GHz (dual-core; 4MB cache; boost up to 3.9GHz)
Graphics: Intel UHD Graphics 615 (300MHz)
Screen: 13.3-inch Full HD (1,920 x 1,080; 166 ppi)
Ports:2x USB-C 3.1 (charging and display out), 3.5mm headphone jack
Connectivity: Wi-Fi5(802.11ac, 2×2 MIMO, dual-band); Bluetooth 4.2
Cameras: 1080p Duo Cam (2MP, 60 fps)
Size(W×D×H): 311 x 206.3 × 13.4 mm
Pixelbook Go က မိမိနဲ့အတူ အမြဲတမ်းယူဆောင်သွားနိုင်မဲ့ Chromebook Laptop တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အလေးချိန်အားဖြင့် 1 kg(2 lb) ခန့်သာရှိပြီး အထူအားဖြင့် 13 mm သာရှိတဲ့အတွက် တကယ့်ကို ပေါ့ပါးပါးလွှာတဲ့ Laptop တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ (၁၂) နာရီအထိ ဘတ္ထရီအားခံတဲ့အတွက် တစ်နေ့တာလုံး Charger မလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 8th-Gen Intel Core i5 processor နဲ့ Chrome OS က သင့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အမြဲတမ်း လျင်မြန်သွက်လက်နေစေမှာပါ။ လုံခြုံရေးပိုင်းမှာလည်း Titan C လုံခြုံရေး chip နဲ့ Anti-virus Software က Built-in ပါဝင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကို လုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်မှာ Google Doc ကိုအသုံးပြုတာ၊ ခရီးသွားနေရင်း အီးမေးလ်တွေစစ်တာ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ စသဖြင့် သွားရင်းလာရင်းနဲ့ မိမိစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိမိအသုံးပြုတဲ့ပေါ် မူတည်ပြီး (၁၂) နာရီအထိ ဘတ္ထရီအားခံပါတယ်။ မီးရောင်ပါ Backlit ကီးဘုတ်နဲ့ အသံတိတ်ဆိတ်တဲ့ ကီးခလုတ်တွေကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Touchpad ကို ခပ်ကျယ်ကျယ်လေး ထည့်သွင်းပေးထားပြီး တိကျမှုမြင့်မားတဲ့အတွက် အသာအယာထိပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အပူထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးတဲ့ ပန်ကာမဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် သင့်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာတင်ပြီး သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 13.3” အရွယ်အစားရှိ Full HD (Touchscreen) Display နဲ့ စတီရီယို စပီကာနှစ်လုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်ကြည့်ချိန်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို တည်းဖြတ်ချိန် ဒါမှမဟုတ် Voice Chatting ပြုလုပ်ချိန်မှာ အသံနဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အံ့အားသင့်ဖွယ်အရည်အသွေးနဲ့ မြင်တွေ့ရစေမှာပါ။ အားသွင်းဖို့နဲ့ Display Output အတွက် USB Type-C 3.1 ပေါက် နှစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး နားကြပ်ပေါက် တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Graphics: Intel UHD Graphics 615 (300MHz) RAM: 8GB LPDDR3 နဲ့ Storage: 128GB eMMC တို့ကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး Camera အဖြစ် 1080p Duo Cam (2MP, 60 fps) ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Lets you stay unplugged for up to 12 hours, so you don’t need to carryacharger. And when you do needacharge, get up to2hours of use in just 20 minutes so you can keep going.
Get it done. Fast
It starts up in seconds, and makes workingabreeze. The 8th Gen Intel Core processor is built for speed and responsiveness, powering everything you do.
A backlit keyboard and Hush Keys make using Pixelbook Go comfortable and quiet. The touchpad is spacious and accurate, so you only need to usealight touch. The fanless design stays cool to let you comfortably use it on your lap.
With up to 8.3 million pixels and dual stereo speakers, you get amazing picture and sound for watching movies, editing photos, or video chatting.